Ciidamo huwan ah oo isugu tegey Qansax-dheere iyo abaabul ka dhan ah Shabaab oo halkaas ka socda – Radio Daljir
Luulyo 31, 2013 2:50 b 0
Qansax-dheere, July 31, 2013 – Hugaanka sare ee ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwa gobolka Bay ayaa ku jira diyaar-garow ka dhan ah kooxda Al-shabaab, kuwaas oo iyana gacanta ku haya qeybo ka mid ah gobolkaasi, abaabulka ayaa ka bilowday Qansax-dheere.
Taliyaha Guutada kowaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Cabdi Aadan oo arrintaasi ka war-bixiyey, wuxuu sheegay in uu gobolka ka socdo qorshe lagu baacsanayo kooxda Al-shabaab ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka.
Col. Aadan wuxuu intaas ku daray in ay ciidamo fara badan isugu tageen deegaanka Qansax-dheere ee gobolkaasi Bay oo ah halka uu ka socdo abaabulka ugu balaarran, taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in howgalka dhowaan uu si wanaagsan u fuli doono.
Docda kale taliyaha Guutada kowaad Col. Ibraahim Cabdi wuxuu intaas ku daray in ay taageero buuxa ka heleen shacabka, taasi oo ah mida u fududaysay in ay ku dhiiradaan la dagaalanka kooxda Al-shabaab.
Habeen hore ilaa shalay waxaa gaaray Qansax-dheerre ciidamo fara badan oo Ethopian ah, warar aan helayno waxay sheegayaan in ciidankaasi oo gaaraya Boqolaal ay wateen ilaa 25 Gaari oo gaadiidka dagaalka ah, waxaana Qansax-dheere laga dareemayaa abaabulkii ugu dambeeyey.